मेगा बैंकको सेयर लिलाम बढाबढमा बिक्रि हुने, चैत १३ आबेदन दिन सक्ने - Kantipath.com
मेगा बैंक लिमिटेडले ३ लाख ८६ हजार ८ सय ८२ कित्ता सेयर लिलाम बढाबढमा बिक्रि गर्ने भएको छ। इच्छुक बोलकबोल दाताले चैत १३ देखि चैत २० सम्म आबेदन दिन सक्ने सेयर निष्काशन तथा बिक्रि प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले जनाएको छ। लिलाम बढाबढमा बिक्रि गर्न राखिएको हकप्रदमा साधारण तर्फ २ लाख १७ हजार ८ सय ९० र संस्थापक तर्फ १ लाख ६८ हजार ९ सय ९२ कित्ता रहेको छ।
इच्छुक बोलकबोल दाताले बिक्रि प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ तथा मेगा बैंकको राइजिंग मल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा चैत २० गते बैंकिङ समय सम्म (३ बजे सम्म) आवेदन पेश गर्नु पर्ने छ। बोलपत्रको नतिजा बिक्रि प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको कार्यलयमा चैत २१ मा ३ बजे खोलिने छ। बोलकबोल दाताले प्रति कित्ता न्युनतम १०० रुपैयाँका दरले १० के भाग जाने गरि न्युनतम १०० कित्ता र बढीमा १० हजार कित्ताका लागि आबेदन दिनु पर्ने छ। सबै भन्दा बढी मूल्यमा आबेदन दिनेले बैंकले लिलाममा राखेको हकप्रद पाउने छन।
२५ प्रतिशत हकप्रद वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुंजी ४ अर्ब ५ करोड पुगेको छ। १३ दश्मलब २५ प्रतिशत बोनस र ६५ प्रतिशत हकप्रद वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुंजी ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। बैंकले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३७ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ।
टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसंग मर्जर प्रक्रियामा रहेकाले हाल मेगा बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ। दुवै बैंकबीच गत माघ ६ मा टुरिजमको १०० कित्ता बराबर मेगाको ९५ कित्ता हुने सहमति भएको हो। मर्जर पश्चात बन्ने मेगा बैंकको चुक्ता पुंजी ९ अर्ब ५० करोड हाराहारी पुग्ने छ।
Previous Previous post: महिनावारी हुदा धेरै रगत बग्छ, के यो समस्या हो ?
Next Next post: पोखरा फाइनान्सले एफपिओ निस्कासन गर्दै
स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च हालसम्म करिब ५ अर्ब
गुराँस लाइफले चुक्ता पुंजी पुर्याउन हकप्रद निष्काशन गर्ने
वोमीले गर्यो लाभांश घोषणा
नेपालको हवाई यातायात अब हट्छ कालो सूचिबाट ?
ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक गाभिने, २३ अर्बको पूँजी कोष, निक्षेप १८८ अर्ब पुग्ने